NYLON VS POLYESTER CARPET (UMAHLUKO KUNYE NEENDIDI) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Nylon vs Polyester Carpet (Umahluko kunye neendidi)
Nylon vs Polyester Carpet (Umahluko kunye neendidi)
Nantsi eyethu isikhokelo seyiloni vs ipholiyesta enezinto eziluncedo kuhlobo ngalunye lwezixhobo zekhaphethi, indleko kwaye yeyiphi eyona nto ilungileyo kuyilo lwakho lwangaphakathi. Ikhaphethi yoboya yoqobo, esetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo, ibuyela umva ngaphezulu kweminyaka eyi-1000 eyadlulayo. Ngama-20thinkulungwane, uboya butshintshelwa izixhobo ezitsha. Nangona ikhaphethi yoboya isekhona, iza ngexabiso eliphezulu.
Nangona kunjalo, iifayibha ezenziwe nge-olefin, i-polyester, i-nylon, kunye ne-acrylic zizinto ezinokufikeleleka ezifumaneka phantse kuwo onke amakhaya kwaye ziyafumaneka naphina apho kuthengiswa ikhaphethi.
Ezona zinto zimbini zidumileyo yinylon kunye ne-polyester, zombini iifayibha zokwenziwa ezisetyenziselwa ukuvelisa ikhaphethi, iiragi zommandla omnye kunye neethayile zekhaphethi ezizimeleyo.
I-Polyester kunye nekhaphethi yenylon nganye ineempawu ezinokuthi okanye ezingafanelanga iimfuno zakho zekhaphethi. Ukuthengela ikhaphethi kuthetha ukufuna olona khetho lulungileyo lokunxiba kunye nokunxiba.
Funda ukuze ufumane umahluko phakathi kwazo zombini iintlobo zekhaphethi Izinto zokunceda uthathe isigqibo sokuba loluphi uhlobo lwekhaphethi olulungele ikhaya lakho okanye iofisi.
indlela yokubhala amanqaku enkosi ngomtshato
Ngaba iNylon okanye iPolyester Carpet ilungile?
Eyona Nylon Carpet
Nylon vs Amaxabiso ekhaphethi yePolyester
I-nylon kunye ne-polyester carpeting zinikezelwa kumanqanaba amanqanaba. Ikhaphethi yepolyester ekumgangatho ophezulu, ihlala inganyamezeleki njengenyiloni, iya kukhupha ikhaphethi yenylon ekumgangatho ophantsi. Xa uthelekisa ikhaphethi, soloko ukhetha inqanaba elifanayo lomgangatho kuhlobo ngalunye.
Zombini i-nylon kunye ne-polyester carpet zineempawu ezahlukileyo, nganye inikezela ngeenzuzo kunye nokungalunganga kwiindidi ezininzi. Apha ngezantsi kukho ukophuka kohlobo ngalunye kunye neenzuzo kunye neengxaki.
Ngaphandel kwe Ikhaphethi yoboya , yona ifayibha yendalo, inylon yeyona nto ihlala ixesha elide kwaye ihlala ixesha elide. Ihlala isetyenziswa kumakhaya abantu kwaye kulula ukuyigcina. Inayiloni iphakama ukunxiba mihla le kunye nokuhamba kweenyawo eziphakamileyo.
Inayiloni ihlala ixesha elide : Inayiloni inokugcinwa okubalaseleyo okuthetha ukuba iifayibha zekhaphethi azibambisi indenti ezivela kwifenitshala enzima kakhulu. Iintsinga ziyaxinwa kunokuba msinyane emva kokuba izinto ezinzima zisusiwe kwaye zibuyela kubude bazo bokuqala. Ukufaka i-nylon kumagumbi osapho, kumagumbi okulala, nakwiipaseji kufanelekile ngenxa yokuqina kwayo.
Inayiloni yiStain Resistant : Izinto ezenza i-nylon carpeting zakhiwe ngaphakathi ekumelaneni nebala. Ukuchitheka kolwelo olufana newayini, ikofu, i-coke, kunye nezinye iziselo ezinombala omnyama akusayi kushiya mabala asisigxina. Sebenzisa irag emanzi kunye nesepha ekhuselekile yenayiloni kuya kucoca ngokulula ibala.
Uluhlu : Ikhaphethi yenylon irhabaxa, kodwa abavelisi banokuluka ifayibha encinci yokuma ukuze ikhaphethi ithambe. Oku kubangela ingxaki ngokuzinza njengoko imicu emincinci iya kunxiba ngokukhawuleza.
Ukugcina : Inayiloni iqulethe imolekyuli yehydrogen ekubumbeni kwayo, isenza ukuba kube lula ukuyicoca kunye nokuyihlaziya ukuba ithe yaphela. Veza ikhaphethi yenylon veki nganye kwaye umphunga ucoce ikhaphethi kanye ngonyaka.
Funda ngakumbi malunga Izinto zekhaphethi zenylon kunye neengozi Apha.
isampulu yomtshato amakhadi enkosi
Ecaleni kwenylon, i-polyester carpeting ithatha indawo yesibini yokuthandwa. Yeyona ilandelayo ikhaphethi ekhankanyiweyo kwimarike. I-Polyester ifikeleleka ngakumbi kunenylon kwaye lukhetho olunobuhlobo xa ufaka ikhaphethi ekhayeni lakho okanye eofisini.
Ipholiyesta ayinakuhlala ixesha elide : Iintsinga zePolyester azinako ukugcinwa okuphezulu kwaye azibuyeli umva nje xa zithathelwe phantsi zizinto ezinzima kunye nokuhamba kweenyawo. I-Polyester ibonisa ukunxiba kwangethuba kwaye ayomelele njengeyiloni.
Ukunganyangeki kwebala : Nangona ikhaphethi yepolyester inganyangeki, iya kunciphisa ukuchitheka kolwelo olusekwe kwioyile. Izinto zokuthambisa ezinamafutha, iijusi ezivela kukutya okunamafutha, okanye ibala leenkuni elisekwe kwioli elilandelwe endlwini phantsi kwesihlangu liyakushiya ibala. Ikhaphethi iya kufuna ukucocwa ngobuchule, kodwa amabala amaninzi ashiya umbala othile.
Uluhlu : Ikhaphethi yePolyester ithambile kwaye iyivelivethi, iyenza ukuba ikulungele ukuhamba ngeenyawo ezingenanto okanye ukuba abantwana bahlale kwaye balale kuyo. Imisonto egudileyo inika igumbi elifudumeleyo nelintofontofo.
Ukugcina : Njengakwikhaphethi yenylon, vacuum ipholiyesta ikhaphethi veki nganye ukunqanda ukunxiba ikhaphethi kubumdaka nakwinkunkuma. Lumka ukhaphethi kwindawo enelanga nelanga ngokuthe ngqo njengoko imicu yekhaphethi izakuphela.
Abavelisi abaphezulu bekhaphethi zenylon badweliswe apha ngezantsi:
I-Shaw ibonelela ngeentlobo ezahlukeneyo zophahla, kwaye ezona zinto zikumgangatho ophezulu wenayiloni yiphepha labo le-ANSO Nylon. Itholakala ngemibala emininzi, izitayela, kunye neetekisi kunye nokuchasana kwebala.
KUNYE nenayiloni nayo inqabile kakhulu ekuchaseni amabala ezilwanyana, isenza ukuba sikhethe ngokugqwesileyo kwabo banezilwanyana zasekhaya. Iikhaphethi zenayiloni kunye nazo zonke ezinye iikhaphethi zenylon ezenziwe nguShaw zinokuphinda zisebenze.
UDupont ubonakala njengenkokeli yeshishini lekhaphethi elinembali ende kwishishini lekhaphethi. Ngo-1935, ikhaphethi yenylon yaqanjwa nguWallace Hume Carothers, owayeyintloko yesebe lophando laseDuPont.
UDupont wenza ikhaphethi yenylon ifumaneke phakathi kwiminyaka yee-1950. Iikhaphethi zayo zenylon zezona zithambileyo kwaye zezona zihlala ixesha elide kushishino kwaye ziyakwazi ukumelana nokungunda.
I-Stainmaster inekhaya eligutyungelweyo kuzo zonke iintlobo zeemeko zokuhlala. Inkampani ibonelela ngamanqanaba amane okupakisha i-nylon ukuhlangabezana neemfuno zakhe nawuphi na umninikhaya.
Kubalulekile -Ukuze ufumane ukhuseleko lwakudala olufikelelekayo, i-Stainmaster's Essentials carpeting ifanelekile kumagumbi eendwendwe kunye neendawo ezinendlela encinci yeenyawo.
Usapho oluSebenzayo -Usapho olukhulu olunabantwana abaninzi kunye nabazukulwana, iKhaphethi eSebenzayo yoSapho evela eStainmaster inikezela ukomelela okuhle kunye nokumelana nebala.
Khusela izilwanyana zasekhaya -U-Stainmaster uvelisa le khaphethi yenylon ngeentsinga ezisisisombululo-idayi yenylon polymer enokunganyangeki kwebala. Khusela iifayibhile zekhaphethi ukugxotha uboya bezilwanyana zasekhaya, zisenza ukuba kube lula ukuzikhupha.
ITruSoft - Le yeyona nto ithambileyo ye-Stainmaster carpeting kwaye ihlale kamnandi. Imvakalelo yobutofotofo isabandakanya ukomelela kunye nokuchasana namabala aphezulu eStainmaster carpeting.
I-Stainmaster ngoku iyinxalenye yomtya we-Invista, kwaye i-Stainmaster nylon carpeting eyenziwe ngu-Invista ibizwa ngokuba yi-6,6, ifayibha ephezulu yenayiloni.
Le khaphethi yenylon ineentsinga ezenziwe ngekhabhoni ezimbini ezivumela ukugcinwa kombhoxo okungaphezulu. I-Invista yenza ikhaphethi kunye nelona nqanaba liphezulu lokuchasana nebala kwaye yinto eyaziwayo kubanini bamakhaya.
I-Duracolor yePrimiyamu yeNylon Carpeting yokukhetha eMohawk iqinisekisiwe njengongenasiphako naphakade, ehlala ihleli, kwaye ihlala intle ngonaphakade.
unxiba njani umtshato
Banikezela ngokhetho lwemibala engama-300, kwaye yonke ikhaphethi yenylon yenziwa ukusuka kuma-30% eemathiriyeli eziphinda zenziwe. I-Mohawk yenye yezona zinto zindala zivelisa iikhaphethi e-United States.
I-Polyester ihlala ibiza kancinci kunenylon, kuxhomekeke kumgangatho weefayibhethi zekhaphethi. I-Plush polyester carpeting esuka eDuPont inokuthi ikhuphe ii-Essentials carpeting ezivela eStainmaster. Amaxabiso asekwe kudidi lwezixhobo, ubume, umbala, kunye nepateni.
Apha ngezantsi kukho itshathi yabenzi bekhaphethi benylon abahlanu abaphezulu kunye nexabiso labo lokuthelekisa ikhaphethi.
Igama lebrand Uhlobo Uhlobo lwefayibha Ixabiso ngeenyawo zenyawo nganye
UMohawk Tolika Nylon I $ 1.61
Shaw I-Keynote ebhaliweyo Ipholiyesta $ 1.58
Dupont SmartStrand Nylon $ 2.29
Umgcini webala IPetProtect Shimmer Nylon $ 3.88
tyala imali Utyikityo Nylon $ 5.48
Xa uthenga ikhaphethi yenylon vs ipholiyesta kungcono ukuba uqwalasele iimfuno zakho kunye nohlahlo-lwabiwo mali, ukunceda ukwenza esona sigqibo sokuthenga phakathi kwezi ntlobo zimbini zekhaphethi ekhayeni lakho.
Ngolwazi oluthe kratya ndwendwela inqaku lethu malunga imibala yekhaphethi engabonisi mdaka .
Umtshato waseIndiya oza kunxiba
iringi ecocekileyo yomtshato ene-hydrogen peroxide
Uyilo lwepatio egobile
unxibe ntoni kwishawa yomtshato
iyadiya yommandla wentlango